अलेक्सा र्‍याङकिङको यस्तो छ खास कुरो « Clickmandu
अलेक्सा र्‍याङकिङको यस्तो छ खास कुरो
प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७३, शनिबार १५:४३
इन्टरनेट बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । सर्च इन्जिनमा होस् कि वेब र्‍याङकिङमा, आफ्ना प्रतिश्पर्धीलाई कसरी पछि पार्ने वेबसाइट सञ्चालकहरू तछाड मछाडमा छन् । ‘अलेक्सा र्‍याङ्किङ’ नेपालमा कतिपयका लागि प्रतिस्पर्धा र प्रतिष्ठाको मापक बन्ने गरेको छ ।
के हो अलेक्सा र्‍याङकिङ ?
दुई अमेरिकी युवा उद्यमीले सन १९९६ मा सुरु गरेको अलेक्सा प्रोजेक्ट (अलेक्सा डट कम) लोकप्रिय बन्दै गएपछि प्रतिष्ठित कम्पनी अमेजनले सन १९९९ मा खरिद गर्यो । साइट र्‍याङ्किङ मात्र अलेक्साको सेवा होइन् तर सबैभन्दा बढि रुचाइएको विशेषता भने यही हो ।
अलेक्साले वेबसाइटहरूको लोकप्रियता तीन प्रकारले वर्गीकरण गर्छ । विश्वव्यापी, देश अनुसार र ‘क्याटेगोरी’ अनुसार अलेक्साले लोकप्रिय साइटहरूको सूचि बनाउँछ । आजकल कुन वेबसाइटको लोकप्रियता कति छ भनेर वेबसाइट सञ्चालक, व्यापार प्रवर्धक र अनुसन्धानकर्तालाई एउटा राम्रो ‘रिफ्रेन्स’को रूपमा अलेक्सा स्थापित भएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढि लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल र समाचारमुलक साइटहरू छन् । भारतमा अनलाइन सपिङ र वर्गीकृत विज्ञापनका साइट बढि प्रयोगमा आउँछन् । अमेरिकामा बैंकिङ वेबसाइटहरूको प्रयोग व्यापक छ । बजार र समाजको विश्लेषण गर्ने राम्रो तथ्याङ्क स्रोत बनेको छ अलेक्सा ।
भिजिटरको वास्तविक तथ्याङ्क
वेबसाइटसँगै इन्टरनेट ब्राउजरले भिजिटर ट्राक गर्ने स्क्रिप्ट वा सर्भरले रिसिभ गर्ने रिक्वेस्टको भरपर्दो संकलन बिना बेवसाइटका बास्तविक भिजिटर थाहा पाउन सकिन्न । तपाइको अनुमति बिना नै तपाईको वेबसाइटको तथ्याङ्क संकलन भइराखेको छ भने यो गोपनीयता र अन्य सुरक्षा संवेदनशीलता माथि हस्तक्षेप हो । यसलाई कानुनले पनि अनुमति दिँदैन ।
त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाइको अनुमति बिना कुनै पनि दोस्रो वेबसाइट वा व्यक्तिले तपाईँको वेबपेजको वास्तविक भिजिटर वा लोकप्रियता के छ पत्ता लगाउन सक्दैन ।
तपाइको अनुमति बिना कुनै पनि दोस्रो वेबसाइट वा व्यक्तिले तपाईँको वेबपेजको वास्तविक भिजिटर वा लोकप्रियता के छ पत्ता लगाउन सक्दैन ।
अलेक्साले कसरी थाहा पाउँछ त ?
अलेक्साले बेबसाइटहरूको लोकप्रियता तय गर्न दुई ढंगले तथ्याक संकलन गर्दछ । एउटा अनुमानित (इस्टिमेटेड) अर्को प्रमाणित (भेरिफाइड) ।
स्टिमेटेड र्‌याङ्किङको तथ्याङ्क संकलन गर्न अलेक्साले वेबसाइटबाट अनुमति लिँदैन् । तर उसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ब्राउजरमा हुने टुलबार र पल्गइन्सहरूको सहायताले तथ्याङ्क संकलन गर्दछ । यसमा अलेक्साको आफ्नै टुलबार पनि छ ।
स्टिमेटेड र्‌याङ्किङ भनेको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने स्याम्पलिङ जस्तो मात्रै हो । तर अलेक्सामा अधिकाशं वेबसाइट यसैका आधारमा तय हुन्छन् ।
इस्टिमेटेड र्‌याङ्किङ भनेको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने स्याम्पलिङ जस्तो मात्रै हो । तर अलेक्सामा अधिकाशं वेबसाइट यसैका आधारमा तय हुन्छन् ।
भरिफाइड र्‍याङ्किङमा भने अलेक्साले वेबसाइट सञ्चालकको अनुमतिमा नै उसका वास्तविक भिजिटरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछ । उसले वेबसाटइमा प्रयोग गर्ने ‘ट्राकिङ कोड’ उपलब्ध गराउँछ र बास्तविक भिजिटरको सङ्ख्या लगायत अन्य तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछ । यसको लागि वेबसाइट सञ्चालकले अलेक्सालाई मासिक शुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
पैसा तिरेर र्‍याङ्किङ बढ्छ?
पैसा नतिरीकन अलेक्साले संकलन गर्ने तथ्याङ्कमा धेरै सिमितता छन् । टुलबार र प्लगइन्सले मात्र दिने तथ्याङ्कले सबै भिजिटर समेट्दैन् । त्यसैले पैसा तिरेर ट्याकिङ कोड वेबसाइटमा राखेपछि सित्तैको भन्दा र्‍याङ्किङमा ब्यापक सुधार आउँछ ।
अलेक्साले तीन तहका सुविधा सहित पैसा लिन्छ । तर, धेरै पैसा लिँदैमा र्‍याङ्किङ बढाउने होइन । आफ्ना भिजिटर संख्या, प्रतिश्पर्धी वेबसाइटका विवरण, सर्च इन्जिनसँग सम्बन्धित सुधारका सुझाब, साइट लोकप्रिय बनाउन के सुधार गर्न सकिन्छ जस्ता टिप्सहरू मुल्य अनुसार उपलब्ध हुन्छ्न् । धेरै पैसा तिरेर मात्र र्‍याङ्किङमा फड्को मारिदैन् ।
नेपालमा कुन वेबसाइटले अलेक्सालाई पैसा तिर्छन्?
नेपालको अलेक्सा र्‍याङ्किङमा सबैभन्दा अगाडि रहेका अनलाइनखबर, नागरिकन्युज, रातोपाटी, अन्नपूर्णपोष्ट, न्युज२४नेपाल, इताजाखबर, मिडिया एनपी, नेपाली हेडलाइन्स, पुर्वेली न्युज, बिगुल न्युजले अलेक्सालाई पैसा तिरेर भेरिफाइड ट्याकिङ कोड् लिएका छन् ।
टप र्‍याङ्किङमै रहेका इकान्तिपुर, सेतोपाटी, उज्यालो अनलाइन, बिजमान्डु जस्ता साइटले भने पैसा तिर्दैनन् । यि साइटको र्‍याङ्किङ स्टिमेटेड मात्रै हो । धेरै भिजिटर हुने साइटको स्टिमेटेड भिजिटर पनि बास्तविकताको नजिक हुने दाबी अलेक्साले गरेको छ । जस्तो कि गुगल, फेसबुक जस्ता साइटले पैसा तिरेर टप लिस्टमा परेका होइनन् ।
पैसा तिर्न जरुरी छ?
अलेक्साले र्‍याङकिङ बाहेक पनि वेवसाइटमा प्राविधिक सुधारमा थुप्रै सुझाब दिन्छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धाको विवरण दिएर तपाइलाई आफ्नो रणनीति बनाउन सघाउ पनि पुर्याउँछ । गुगल एनालाइटिक्स जस्ता ट्राकिङ प्लेटफर्मको विकल्पको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
तर, यी सुविधा पाउन अलेक्सा बाहेक सित्तैमा पाइने अरू विकल्प पनि काफी छन् ।